Mifangaro voraka be ihany… | NewsMada
Mifangaro voraka be ihany…
Amin’izao, anaovana politika avokoa izay azo ihetsehana rehetra? Lalaovina hatramin’ny mpianatra amin’ny fizarana kojakojam-pianarana. Arahaba soa, arahaba tsara, raha mba henika izany avokoa ny mpianatry ny EPP sy CEG manerana an’i Madagasikara. Mba tsy hisy zanak’Ikalahafa.
Sao fihetsiketsehana no be ka ny akaiky ihany no hita? Na noho ny antony politika: dona tapany hahazoana erany. Azo itarafana an’i Madagasikara, hono, Antananarivo Renivohitra, eo amin’ny lafiny politika. Hahavory vahoaka amin’izao ve raha tsy asiana fanomezana arahina fampisehoana?
Amin’ny matso-miaramila isaky ny 26 jona aza, misy ny fanambazana mpijery etsy sy eroa. Sao tsy mahazo olona… Ny fanomezana no mahamaika sy zava-dehibe amin’ny mpandray, fa tsy ny mpanome? Efa any amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, taona 2018, tsinona izay atao rehetra amin’izao.
Amin’izany rehetra izany, mifangaro voraka amin’izay kilalao politika tsy mazava izay ny tena fitiavan-tanindrazana, fitsinjovana vahoaka, fijerena ny tombontsoa ambonin’ny firenena. Vao mainka ny hoe asa fampandrosoana, fanamaivanana ny fahantram-bahoaka, fitsinjovana ny hoavin’ny taranaka…
Tsy vitan’izany, mifangaro voraka koa ny amin’izay enti-manana ireny tolotolotra ireny, arahina hetsika sy fampisehoana hoe maimaimpoana: tany am-paosin’ny tena manokana sa noloarana tao amin’ny kitapom-bolam-panjakana? Tsy mazava. Na misy aza ny fanazavana, tsy maharesy lahatra,
Tsy misy fangaraharana tsinona na inona lazaina sy atao. Vokany, mila tsy fantatra intsony ny maha olom-panjakana sy ny maha “kandidà” efa ipetrahana amin’ny maha olom-pirenena tsotra. Tsy mahagaga fa efa nifangaro voraka hatrany am-piandohana ny raharaha amin’izao fitondrana izao.
Eo ny tsy fanarahan-dalàna, tsy fisian’ny fangaraharana, ny tsy fananana fandaharanasa sy fomba fiasa mazava, ny kitsapatsapa amin’izay atao. Tsy inona fa fanamafisam-pahefana hoe fitoniana? Fiadiana izay hanohizana izany indray izao… Hifangaro voraka amin’izany amin’ny fifidianana ve ny vahoaka?